वाइडबडी काण्डमा को को छन् ? खोजी गरौंः सांसद सूर्य पाठक (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
वाइडबडी काण्डमा को को छन् ? खोजी गरौंः सांसद सूर्य पाठक (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Jan 09, 2019
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबसको दुईवटा ‘वाइडबडी’ जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टचार भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । साथै भ्रष्टचारमा संलग्न देखिएका परदाधिकारीलाई कार्वाहीको सिफारिस पनि गरेको छ ।
उपसमितिले यो अनियमिततामा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो । अधिकारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ । उपसमितिले सिंगो जहाज खरिद प्रक्रिया नै अनियमितताका लागि रचिएको ठहर गरेको छ ।
नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घण्टा उडेको जहाज किन्ने भन्नुको अर्थ जहाज किन्दा प्राप्त हुने छुट दुरुपयोगको लक्ष्य राखेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
उप समितिको प्रतिवेदनाका आधारमा कारवाही प्रकृया थालिए अझै धेरै व्यक्तिहरु तानिने निश्चित छ । यसै विषयमा न्युज २४ टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति ‘६ प्रश्न’मा कुराकानी गर्दै सांसद डा.सूर्य पाठकले वाइडबडी काण्डका मुछिएकाहरुको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘वाइडबडी काण्डमा को को छन् ? खोजी गरौं ।’